Maxay ka wada hadleen Odayasha Beelaha Hawiye iyo RW ku-xigenka dalka ee kulmay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay ka wada hadleen Odayasha Beelaha Hawiye iyo RW ku-xigenka dalka ee...
Muqdisho (Halqaran.com) – Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa Tallaadadii maanta xafiiskiisa ku qaabilay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ee dhawaan magaalada Hargeysa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Madaxda dhaqanka Beelaha Hawiye, ee uu hoggaaminayay Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, oo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kala soo wareegay 19-ka Maxbuus ee cafiska uu u fidiyay ayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka uga war bixiyay sidii Soomaalinimada, xushmadda iyo qadarinta laheyd ee loogu soo dhaweeyay Hargeysa.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya, ayaa madaxweynaha Somaliland ku ammaanay soo dhaweynta Soomaalinimada leh ee uu ku qaabilay odayaasha gobalka Banaadir.
Sidoo kale, odyaasha dhaqanka uga mahad celiyay gacanta ay ka geysteen in mawaadiniintaas Soomaaliyeed ay xorriyaddooda dib u helaan.
Wuxuuna ku dhiirrageliyay in ay sii wadaan dowrka ballaaran ee dhaqanku ku leeyahay bulshada dhexdeeda.
Odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ee maanta la kulmay Mahad Khadar ayaa intuu uu socday kulanka ka codsadeen in la soo daayo oo iyna cafis loo fidiyo mawaadiniin kale oo dhallinyaradan ay isku xukun ahaayeen oo ku xiran Xabsiyada Puntland iyo xabsiga dhexe ee dalka.
Odayaasha Beelaha Hawiye
RW Ku xigeen